စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာမေးခွန်းများ၊ ဖြေရှင်းနည်းများ ဤနေရာတွင်။
ကွဲပြားခြားနားသော PET ပစ္စည်းများ၏အပူချိန်လုပ်ငန်းစဉ်
PET extrusion line ၏ လုပ်ဆောင်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်များ
1. ပစ္စည်းကို အခြောက်ခံဖို့ လိုအပ်ပါသလား။ PET စာရွက် extrusion လိုင်း?
ပုံမှန်အားဖြင့် အခြောက်ခံရန် မလိုအပ်ပါ။ ထူးခြားသော ဖုန်စုပ်စနစ်ဖြင့် CHAMPION ၏ အထူးအမြွှာဝက်အူ extruder ။ extruder တွင် ပစ္စည်း၏ အစိုဓာတ်ကို ကုန်ဆုံးစေရုံသာမက ပစ္စည်းရှိ အညစ်အကြေးများကိုပါ ကုန်ဆုံးစေသည်။ သို့သော် ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်း များလွန်းပါက၊ စာရွက်အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် သာမန်အခြောက်ခံစက်ကို အသုံးပြုပါ။
2. PLA ဆိုတာဘာလဲ။
PLA (ပိုလီလက်တစ်အက်ဆစ်) သည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲဖြစ်သော ဇီဝရုပ်ကြွင်းပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ အပင်အရင်းအမြစ်များ (ဥပမာ ပြောင်း၊ ပီလောပီနံစသဖြင့်) မှ ထုတ်ယူသော ကစီဓာတ်ကုန်ကြမ်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် ညစ်ညမ်းမှု ကင်းစင်ပါသည်။ ယခုအခါ PLA စာရွက်ကို အချို့သော အစားအသောက်ထုပ်ပိုးမှုများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာကြသည်။
3. မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ဘယ်လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြမလဲ။
ကျေးဇူးပြု၍ နောက်ဆုံးစာရွက်ထုတ်ကုန်၏ အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ၊ ဥပမာ၊ အကျယ်၊ အထူ၊ စွမ်းရည်၊ အသေးစိတ် ထုတ်ကုန်လျှောက်လွှာနှင့် ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု အခြေအနေတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အကြံပြုချက်အချို့ပေးပါမည်။
4. ပလပ်စတစ် extruder သည် မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို ကိုင်တွယ်နိုင်ပါသလား။
နံပါတ်- extruder ၏ ဒီဇိုင်းသည် ကွဲပြားခြားနားသော အစေးပစ္စည်းအပေါ် အခြေခံပြီး ပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏ လက္ခဏာများ ကွဲပြားပါသည်။ အထူးပစ္စည်း၊ အထူးစက်။
5. ပွင့်လင်းမြင်သာသောစာရွက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အဘယ်ကြောင့်အနက်ရောင်အစက်ရှိနေသနည်း။
ကျေးဇူးပြု၍ ကုန်ကြမ်းတွင် အညစ်အကြေးများ ရှိနိုင်သည်ကို စစ်ဆေးပါ။ သို့မဟုတ် extruder တွင် အညစ်အကြေးများ ရှိနေနိုင်သည်။
ပထမဦးစွာ၊ စာရွက်၏အထူအကွာအဝေးသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ မတူညီသော စာရွက်အထူတွင် တူညီသောစွမ်းရည်ကို လိုချင်ပါက၊ အမြန်နှုန်းသည် အလွန်ကြီးမားမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် လျှပ်စစ်အမြင်အရတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အထူသည် အလွန်ပါးလွှာပြီး စွမ်းရည်ကြီးမားပါက၊ ပါးလွှာသောထုတ်ကုန်အတွက် အထူးစက်ကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ အထူးစက် အထူးအသုံးပြုခြင်း။